elu ugboro itinye n'ọkwa hardening elu usoro
Nnukwu Usoro Ntinye Oge Ogologo Oge
Ọkụ na-eme ka ike gwụ eji mee ihe karịsịa maka nhịahụ / ịgbanyụ nke na-ebu ebe na akụ na akụkụ ndị dị mgbagwoju anya ebe naanị otu mpaghara chọrọ ka a kpoo ya ọkụ.
Site na nhọrọ nke oge ọrụ nke induction usoro oku, a na-akọwa omimi omimi nke ịbanye n'ime.
Na mgbakwunye, enwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na a ga-eme ka mpaghara ahụ sie ike na ikuku, mmiri ma ọ bụ nwee emulsion pụrụ iche pụrụ iche. Dabere na onye jụrụ ajụ, a na-enweta ogo ogo dị iche iche.
Ọkụ na-eme ka ike gwụ Enwere ike ịghọta dị ka akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ akpaaka akpaghị aka. Enwekwara ike ime ka obi sie gi ike na usoro na-aga n'ihu.
Adabara harden na tempering nke iche iche workpieces, dị ka itinye n'ọkwa harden nke akụ, Kwadobe, ndu rails, discs, atụdo, na akụkụ ndị ọzọ;
Ọ nwere ọrụ nke ime ihe na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na-eme ka oge na-aga n'ihu, na-eme ka mgbatị na-aga n'ihu, ma na-eme ka oge na-aga n'ihu;
Jiri sistemụ njikwa ọnụọgụ ma ọ bụ PLC na usoro ọsọ ọsọ na-agbanwe usoro iji ghọta nhazi ọrụ na nyocha, ma jikọọ PLC na ntinye ọkụ ọkụ ọkụ iji chọpụta nrụpụta akpaghị aka.
Vetikal (hardening nke akụkụ) + kehoraizin (hardening nke gia mgbanaka akụkụ)
Harding bụ otu n'ime HLQ ntinye ọkụ mpaghara sistemụ ike gasị. Ọtụtụ narị ihe na-agwụ ike anyị na-arụ ọrụ gburugburu ụwa-ọtụtụ n'ime ha n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Isi uru nke ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka ime ka obi sie ike bụ na ọ na-ewe obere sekọnd. N'ime ọkụ, otu usoro ahụ nwere ike iwe ọtụtụ awa ma ọ bụ ọbụna ụbọchị. Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume?
Azịza ya bụ na itinye n'ọkwa bụ ihe ịtụnanya na iwepụta okpomọkụ ọsọ ọsọ. Nke a, n'aka nke ya, pụtara na ị nwere ike iwekota hardening na usoro mmepụta. Masi ike n'oké ọkụ, n'aka nke ọzọ, na-ewe oge dị ukwuu (ọkụ na-efu ukwuu) ma na-achọ ịkwaga ihe ndị ahụ ma ọ bụ n'ọkụ gị ma ọ bụ nke onye ọrụ ngo
Mwekota nke ntanetị na-eme ka oge na-eduga gị nke ukwuu.
Nweta njikwa zuru oke na ogo, oge nnyefe yana ụgwọ. Enweghị mkpa ibugharị ọtụtụ kilogram nke ngwongwo na-aga n'ihu, nke na-azọpụta ike na gburugburu ebe obibi.
HLQ Induction Heating Power Systems nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe na nrụgide na-arụ ọrụ ma na-ewe iwe dị iche iche. Na obi nke sistemụ siri ike ọ bụla bụ HLQ Induction Heating Power Systems Induction Heat Power Source, onye nrụpụta ihe kachasị na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ndị a na-atụgharị uche a na-enye aka na-enye aka ime ka nsonaazụ kacha mma kwa ụbọchị, kwa afọ
The induction hardening machine gunyere Vertical Scanning, Horizontal (centerless) Nyocha na igwe ahaziri aka - na Oghere Usoro na / ma ọ bụ nke yiri nke a na-akwụ ụgwọ ikike itinye n'ọbara nwere ike dị iche iche na ọkụ ọkụ.
Nke a na usoro hardening igwe ngwá ọrụ na-eji ọnụ ọgụgụ akara technology, nwere na-aga n'ihu, imekotaotuugbo, na-aga n'ihu na-sectionally-imekotaotuugbo quenching ọrụ, ọ na-bụ-eji maka itinye n'ọkwa quenching nke akụ, discs, atụdo na Kwadobe, na-apụta site na elu quenching nkenke. hardening igwe akụrụngwa ejiri site na ijikọ ya na usoro ugboro ole, ụda superaudio, oge dị elu na ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ.
CNC quenching / hardening machine tool feature:
Usoro CNC: Igwe ihe ngbacha elu nke oge CNC nwere ike ikpokọta ma chekwaa usoro mmemme dị iche iche dị iche iche dịka ọrụ dị iche iche chọrọ.
HMI: ụdị mmemme na ngosipụta igwe mmadụ na Bekee na Chinese.
Nchịkwa na-edozi: ọ nwere ike ijikwa ike kpo oku ịmalite, kwụsị, akụkụ kpo oku na oge jụrụ oyi, ọsọ ntụgharị na ọsọ ije.
Lathe: tinye usoro a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Top ukpụhọde akụkụ: ịmụta electric ukpụhọde, na-aghọta clamping nke dị iche iche ogologo ọrụ ibe.
Ọrụ table usoro: ịmụta bọl ịghasa na servo moto na-akwọ ụgbọala, na-akwọ ụgbọala ìhè, elu ndu nkenke na ezi n'ọnọdu.
Main aro adiana usoro: ịmụta agbanwe ugboro regulating ịghọta akụkụ adiana ọsọ na-aga n'ihu gbanwee.
Akụkụ eletriki: akụrụngwa akụrụngwa nwere ọrụ nchedo ike, nwere oke nchekwa na ntụkwasị obi.
Okpokoro: nke eji akwa igwe mee, ya na windo ya na onu uzo ya, gbochie nchapu mmiri, odi mfe ibu uzo ma nyochaa usoro mmechi.
CNC vetikal hardening / quenching igwe ngwá ọrụ
Dị ka ndị dị iche iche nke workpiece, e nwere vetikal ụdị, kwụ ụdị,ụdị mechiri emechi, ụdị ahaziri, wdg.
1.Standard SK-500 / 1000/1200 / 1500 workpiece na-akpụ akpụ ụdị N'ihi nkọ, discs, atụdo na Kwadobe hardening
2.SK-2000/2500/3000/4000 Transformer na-akpụ akpụ ụdị, Ejiri maka kpo oku ogologo karịa 1500mm shaft
3.Closed ụdị: ngwaahia maka nnukwu aro, More ọcha ọrụ gburugburu ebe obibi.
4.Horizontal hardening machine tool
SK-500 / 1000/1200 / 1500/2000/2500/3000/4000 Ejiri mee maka ezigbo ntụ
Max kpo oku ogologo （mm） 500 1000 1200 1500
Max kpo oku n'obosara （mm） 500 500 600 600
Max na-ejide ogologo （mm） 600 1100 1300 1600
Max arọ nke workpiece Kg） 100 100 100 100
Workpiece adiana ọsọ （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
workpiece na-akpụ akpụ ọsọ （mm / min） 6-3000 6-3000 6-3000 6-3000
jụrụ usoro Hydrojet jụrụ Hydrojet jụrụ Hydrojet jụrụ Hydrojet jụrụ
ọsọ ọsọ voltaji 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz
Motor ike 1.1KW 1.1KW 1.2KW 1.5KW
Akụkụ LxWxH (mm) 1600 x800 x2000 1600 x800 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3200
ibu （Kg） 800 900 1100 1200
Max kpo oku ogologo （mm） 2000 2500 3000 4000
Max kpo oku n'obosara （mm） 600 600 600 600
Max na-ejide ogologo （mm） 2000 2500 3000 4000
Max arọ nke workpiece Kg） 800 1000 1200 1500
Motor ike 2KW 2.2KW 2.5KW 3KW
Akụkụ LxWxH (mm) 1900 x900 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3400 1900 x900 x4300
ibu （Kg） 1200 1300 1400 1500
CNC harden / quenching machine tool feature:
1.CNC usoro: Igwe na-eme ka igwe na-agba ume ugboro ugboro nwere ike ikpokọta ma chekwaa usoro mmemme dị iche iche dị iche iche dịka ihe dị iche iche chọrọ.
2.HMI: ụdị mmemme na igwe mmadụ ihu ngosipụta na Bekee na Chinese.
3.Control gbanwee: ọ nwere ike ijikwa ike kpo oku ịmalite, kwụsị, akụkụ kpo oku na oge jụrụ oyi, ntụgharị ntụgharị na ọsọ ije.
4.Lathe: ịmụta welded Ọdịdị na ezi nchara na-àmà ọrụ.
5.Top ukpụhọde akụkụ: ịmụta electric ukpụhọde, na-aghọta clamping nke dị iche iche ogologo ọrụ ibe.
6.Work okpokoro usoro: ịmụta bọl ịghasa na servo moto na-akwọ ụgbọala, na-akwọ ụgbọala ìhè, elu ndu nkenke na ezi n'ọnọdu.
7.Main aro adiana usoro: ịmụta agbanwe ugboro regulating ịghọta akụkụ adiana ọsọ na-aga n'ihu gbanwee.
8.Electric akara akụkụ: igwe akụrụngwa nwere ike-atọghe nchedo ọrụ, nwere elu nchekwa na ntụkwasị obi.
9.Frame: nke eji akwa igwe mee, ya na windo ya na onu uzo ya, gbochie uzo mmiri, odi mfe ibu uzo ma nyochaa mmechi mmebi usoro.
Categories Technologies Tags akpaka hardening igwe, isi ike, harden igwe, usoro siri ike, hardening usoro, ọgwụgwọ siri ike, elu ike hardening, elu ugboro quenching, mmechi mmebi, usoro induden hardening usoro, Igwe na-eme ka ike na-agwụ ike, itinye n'ọkwa quenching usoro, imenyụ, ekwesi elu Mail igodo